Internet Ministries - Ndivanaani makereke aKristu?
Ndivanaani machechi aKristu?
The Historical background ye Restoration Movement
Mumwe wevatongi vekutanga vekudzokera kuTestamente Itsva yechiKristu, senzira yekuwana kubatana kwevatendi vose munaKristu, akanga ari James O'Kelly weChechi Methodist Episcopal Church. Muna 1793 akabva kumusangano weBaltimore wechechi yake uye akadana vamwe kuti vabatane naye pakutora Bhaibheri sechitendero chega. Kufuridzira kwake kwakanyanya kunzwa muVirginia neNorth Carolina apo nhoroondo inonyora kuti vamwe vateresi zviuru zvinomwe vakatevera hutungamiri hwake kuenda kudzokera kuChiKristu chekare chekare.
Muna 1802 mutambo wakafanana pakati pevaBaptist muNew England wakatungamirirwa naAbnner Jones naEria Smith. Vakanga vaine hanya ne "mazita emachechi uye zvitendwa" uye vakasarudza kupfeka chete zita rechiKristu, vachitora Bhaibheri semutungamiri wavo oga. Muna 1804, kumadokero kumiganhu yenyika yeKentucky, Barton W. Stone nevamwe vaparidzi vakawanda vePresbyterian vakatora chiito chakadaro vachizivisa kuti vaizotora Bhaibheri se "chechokwadi chekutungamirira kudenga." Thomas Campbell, uye mwanakomana wake anoyevedza, Alexander Campbell, vakatora matanho akafanana mugore ra1809 mune izvo zvino yava West Virginia. Vakarwisana kuti hapana chinofanira kusungwa pavaKristu sechinhu chekudzidzisa chisiri chekare seTesitamende Itsva. Kunyange zvazvo izvi zvikamu zvina zvakange zvakasununguka zvakakwana mukutanga kwavo pakupedzisira vakava musangano mumwechete wekudzorera nekuda kwechinangwa chavo pamwe chete uye chikumbiro. Varume ava havana kutsigira kutanga kwechechi itsva, asi pane kudzokera kukereke yaKristu sezvinotsanangurwa muBhaibheri.
Nhengo dzechechi yaKristu havazvifungidziri sechechi itsva yakatanga pedyo nekutanga kwezana remakore re19. Pane kudaro, sangano rose rakagadzirwa kuti ribereke munguva yemazuva ano kereke pakutanga yakagadzwa paPendekosti, AD 30. Simba rekutsvaga riripo mukudzorerwa kwechechi yaKristu yekutanga.
Icho chinonyanya kukumbira kubatana kwechitendero kunobva muBhaibheri. Munyika yechitendero yakakanganwa inofungidzirwa kuti Bhaibheri ndiro chete rinogona kuve sangano rinowanikwa apo vazhinji, kana kwete vose, vanhu vanotya Mwari venyika vanogona kubatana. Ichi chikumbiro chekudzokera kuBhaibheri. Icho chikumbiro chekutaura uko Bhaibheri rinotaura uye kuti ramba rakanyarara apo Bhaibheri risina kunyarara muzvinhu zvose zvine chokuita nechitendero. Iyo inowedzera kusimbisa kuti mune zvose zvechitendero kunofanira kunge kune "Izvi ndizvo zvinotaura Ishe" pane zvose zvinoitwa. Chinangwa chiri kubatana kwechitendero kwevatendi vose munaKristu. Nheyo ndiyo Testamente Itsva. Iyo nzira ndiyo kudzorerwa kweTestamente Itsva yechiKristu.
Nhamba yakanyanya kuwedzerwa yakavimbika inonyanya kuwedzera pane machechi e-15,000 mumwe oga aKristu. I "Christian Herald," bhuku guru rechitendero iro rine zvinyorwa pamusoro pemachechi ose, anofungidzira kuti nhengo yose yemachechi aKristu ikozvino 2,000,000. Kune vakawanda vanopfuura 7000 varume vanoparidza pachena. Nhengo dzechechi ndiyo inonyanya kuitika kumaodzanyemba kweUnited States, kunyanya Tennessee neTexas, kunyange zvazvo ungano iripo mune imwe neimwe yezvema makumi mashanu uye munyika dzinopfuura makumi masere kune dzimwe nyika. Kuwedzera kweMamishinari kwakave kwakakura zvikuru kubva muHondo Yenyika yechipiri muEurope, Asia neAfrica. Zvinopfuura vashandi venguva yakazara ye450 vanotsigirwa kune dzimwe nyika. Machechi aKristu iye zvino ane kashanu nhengo dzakawanda sezvakataurwa mumusangano weChristian Census we1936.
Kutevera chirongwa chesangano chinowanikwa muTesitamende Itsva, machechi aKristu anozvimirira. Kutenda kwavo kwakafanana muBhaibheri uye kubatisisa dzidziso dzaro ndiko kushamwaridzana kukuru kunovasunga pamwe chete. Hakuchina hukuru hwepamusoro chechechi, uye hapana sangano rinokunda vakuru veungano yega yega. Ungano dzinoshanda pamwe nekuzvidira mukutsigira nherera nevakwegura, mukuparidza vhangeri mumitambo mitsva, uye mune mamwe mabasa akafanana.
Nhengo dzechechi yaKristu dzinoita makoreji makumi mana uye zvikoro zvekondari, uyewo makumi manomwe nemashanu nherera nemisha yevakwegura. Kune mimwe magwaro e40 nemamwe mapeji akabudiswa nemunhu wese wekereke. Sangano rose reredhiyo uye terevhizheni, inozivikanwa se "The Herald of Truth" inotsigirwa nechechi ye Highland Avenue muAbilene, Texas. Mari yakawanda yegore negore ye $ 1,200,000 yakabatanidzwa pamusangano-wakasununguka nemamwe machechi aKristu. Purogiramu yemavhidhiyo ikozvino inonzwika pane zviteshi zveredhiyo zvinopfuura 800, apo chirongwa cheterevhizheni chiri kuonekwa zvino pane zviteshi zve 150. Imwe yeruzhinji yeruzhinji inozivikanwa se "World Radio" ine mhando yezviteshi zve 28 muBrazil chete, uye iri kushanda zvakanaka muUnited States nedzimwe nyika dzenyika, uye iri kubudiswa mumitauro ye14. Purogiramu yakawanda yekupikisa mumitambo inotungamirira nyika yakatanga munaNovember 1955.
Hapana magungano, misangano yegore negore, kana mabhuku ehurumende. I "tie inosunga" ndeye kuvimbika kunowanikwa kumitemo yekudzorerwa kweChiKristu cheNew Testament.
Muungano imwe neimwe, iyo yakave yakareba kwenguva yakakwana kuti ive yakarongeka zvakakwana, kune vazhinji vevakuru kana vatongi vanoshanda shengo inodzora. Varume ava vanosarudzwa neungano dzomunharaunda pamusana pezvidzidzo zvakagadzirirwa mumagwaro matsvene (1 Timothy 3: 1-8). Kushumira pasi pevakuru vadhikoni, vadzidzisi, nevaevhangeri kana vashumiri. Izvozvo hazvina simba rakaenzana kana rakakwirira kune vakuru. Vakuru ndivo vafudzi kana vatariri vanoshumira pasi pehutungamiri hwaKristu maererano neTestamente Itsva, iyo inoronga mutemo. Hakuna humwe hukuru hwepasi pano hukuru kune vakuru vechechi.
Izwi rekutanga remabhuku ema makumi matanhatu nematanhatu mabhuku anogadzira Bhaibheri anonzi akave akafuridzirwa naMwari, izvo zvinoreva kuti hazvina kukwana uye ane simba. Dzorerai magwaro matsvene anogadziriswa mukugadzirisa mibvunzo yese yechitendero. Chirevo chinobva murugwaro chinoonekwa sezwi rokupedzisira. Bhuku rinokosha rechechi uye chikonzero chekuparidza kwose ndiro Bhaibheri.
Ehe. Mutsara uri munaIsaya 7: 14 inotorwa sehuprofita hwekuzvarwa kwemhandara yaKristu. Testamende Itsva yakafanana neyoMateu 1: 20, 25, inogamuchirwa pamusana pekutarisana kwepamusoro semashoko ekuberekwa kwemhandara. Kristu anogamuchirwa semwanakomana akaberekwa ari oga waMwari, achibatanidza mumunhu wake huMwari hwakakwana uye hukama hwakakwana.
Ndizvo chete mupfungwa yokuti Mwari anofanotemera vakarurama kuti vaponeswe zvachose uye vasina kururama kuti varasikirwa nokusingaperi. Mashoko emupositora Petro, "Chokwadi ndinoona kuti Mwari haasi mutongi wevanhu, asi murudzi rwose uyo anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye" (Mabasa 10: 34-35.) Inotorwa se uchapupu hwokuti Mwari haana kugadzirira vanhu kuti vaponeswe nokusingaperi kana kuti varasikirwa, asi kuti munhu mumwe nomumwe anogadzirisa zvaanoda.
Izwi rokuti kubhabhatidza rinobva pashoko rechiGiriki rokuti "kubhabhatidza" uye rinoreva kuti, "kunyorera, kubhabhatidza, kutenderera." Mukuwedzera kune zvinoreva chaizvo izwi, kubhabhatidza kunoitwa nekuti ndiyo yaiva tsika yekereke munguva dzevaapostora. Zvimwezve, kubhabhatidzwa chete kunofananidzwa nekutsanangurwa kwekubhabhatidza sekupiwa kwemuapositora Pauro munaVaRoma 6: 3-5 apo anotaura nezvazvo seguva nekumuka.
Aiwa. Avo chete vakawana "nguva yekuzvidavirira" vanobvumirwa kubhabhatidza. Inotsanangurwa kuti mienzaniso inopiwa muTesitamente Itsva nguva dzose kune avo vakanzwa evhangeri yakaparidzwa uye vakaitenda. Kutenda kunofanira kugara nguva dzose mberi kwekubhabhatidzwa, saka avo chete vakwegura zvakakwana kuti vanzwisise uye vatende vhangeri vanoonekwa sevanhu vakakodzera kubhabhatidzwa.
Aiwa. Vashumiri kana vaparidzi vechechi havana mimwe mitemo inokosha. Havana kupfeka zita reMutungamiriri kana Baba, asi vanongorongedzerwa chete nezwi Hama semamwe varume vose vechechi. Pamwe nevakuru uye vamwe vanoita mazano uye vanopa avo vanotsvaka rubatsiro.